जब मान्छेले तपाईलाई माया गर्दैन उसले कस्तो व्यवहार गर्छ | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 26/05/2022 18:15 | व्यक्तिगत हेरचाह, जोडी र सेक्स
के तपाइँ केहि समय देखि हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको सम्बन्ध राम्ररी चलिरहेको छैन? के यो बिग्रँदैछ र तपाइँ कारणहरू फेला पार्न सक्नुहुन्न? सायद तपाईको पार्टनरले अब उस्तै महसुस गर्दैन र केहि व्यवहारहरू विषाक्त बन्नको लागि यो कुञ्जी हो। जब मानिसले तपाईलाई माया गर्दैन, उसले कस्तो व्यवहार गर्छ?
यी अवस्थामा यो सबै भन्दा राम्रो छ वृत्तिमा भर पर्नुहोस् र संकेतहरूमा विश्वास गर्नुहोस्। तर अनिश्चितताको त्यो बादलले स्पष्ट झल्काउने बाटोमा बाधा पुर्‍याउँदा यी धेरै संकेतहरू ओझेलमा पर्छन्। सबै भन्दा पहिले, हामी तटस्थ हुनुपर्दछ र आफ्नो राम्रो हेरचाह गर्नुपर्दछ, कठोर निर्णयहरू लिनु अघि कुनै कुराले तपाईंलाई अभिभूत हुन दिनु हुँदैन।
1 उसले तिमीलाई माया गर्दैन जस्तो किन लाग्छ?
2 जब मानिसले तपाईलाई माया गर्दैन, उसले कस्तो व्यवहार गर्छ?
2.1 उसले तिमीलाई पहिले जस्तो विश्वास गर्दैन
2.2 तपाईं उहाँको वरिपरि राम्रो महसुस गर्नुहुन्न
2.3 सधैं रिस उठ्छ
2.4 तिम्रो लागि समय छैन
2.5 तपाईं अब उनीहरूको प्राथमिकता हुनुहुन्न
2.6 भावी योजनाहरु अलपत्र परेका छन्
उसले तिमीलाई माया गर्दैन जस्तो किन लाग्छ?
जब त्यहाँ प्रमाण छ कि उसले अब तपाईलाई माया गर्दैन, यो स्पष्ट भन्दा बढि हुन सक्छ। यद्यपि, कहिलेकाँही हामी यो मामला हो कि भनेर जान्न अलमल्लमा पर्छौं, किनकि तपाईं धेरै अन्तर्मुखी व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ र सुराग दिनुहुन्न।
सामान्यतया देखेको पहिलो कुरा उदासीनता हो, किनकि ती विवरणहरू वा स्नेहका प्रदर्शनहरू जुन त्यहाँ सधैं हराइरहेका छन्। उसको मनोवृत्ति कम मायालु छ वा जहाँ हामी भन्न सक्छौं कि प्रेम सम्बन्धमा उसको कार्य पहिले नै कमजोर छ।
विवरणहरू धेरै हुन सक्छन्, के सामान्यतया बाहिर खडा हुन्छ जब अब तपाईलाई उनीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा समावेश गर्दैन। जब त्यहाँ लक्ष्यहरू हुन्छन्, तिनीहरू सधैं आफ्नो पार्टनरसँग परामर्श गरिन्छ, कम्तिमा जब तिनीहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
उसले तिमीलाई पहिले जस्तो विश्वास गर्दैन
विश्वासको कमी एक लक्षण हो। जब एक व्यक्ति इमानदार हुन्छ, उसको सधैं अर्को व्यक्तिप्रति स्नेह र विश्वास हुन्छ, साथै, यदि त्यस्तो आत्मीयता र सुरक्षा छैन भने समयसँगै सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन।
तपाईं उहाँको वरिपरि राम्रो महसुस गर्नुहुन्न
यस रोचक प्रश्नलाई कभर गर्ने धेरै बिन्दुहरू छन्। यदि तपाई उसको छेउमा हुँदा तपाईलाई राम्रो लाग्दैन भने, यो हुनेछ तिमीले त्यो आराम महसुस गर्दैनौ, किनकि तपाईंको टिप्पणी सकारात्मक वा सुखद छैन।
यदि उसले रमाइलो गर्दैन भने, तपाईले पनि उसको संगतको आनन्द लिनुहुन्न, तर एउटा कुरा हुन्छ, तपाई अब एक व्यक्तिको रूपमा सहज महसुस गर्नुहुन्न। पक्कै पनि तपाईका टिप्पणीहरू अब सकारात्मक छैनन् र यसले सम्बन्धलाई विकसित गर्दैन।
सधैं रिस उठ्छ
जब टिप्पणीहरू सकारात्मक छैनन्, अरू सबैले विषाक्त आभालाई समेट्छ। पक्कै सबै व्याख्याहरू नकारात्मक छन् छलफल भड्काउन। यदि उहाँ केवल खराब मुडमा हुनुहुन्छ जब उहाँ तपाईंसँग हुनुहुन्छ वा एक मनोवैज्ञानिक लडाई खोज्न प्रयास गर्नुहोस्, राम्रो संकेत होइन।
यो नोट गर्न सकिन्छ कि छलफल कहिल्यै राम्रो हुँदैन। सायद जहाँ पहिले अर्को भन्दा केहि छलफल थियो, यो विपरीत हुन सक्छ। यदि त्यहाँ कुनै झगडा वा झगडा नहुनु पनि नराम्रो संकेत हुन सक्छ, सम्बन्ध फस्टाउनको लागि, कुनै न कुनै प्रकारको असहमतिलाई समय-समयमा अर्को व्यक्तिलाई बढ्नको लागि चासो देखाउनुपर्छ।
तिम्रो लागि समय छैन
अर्को संकेत हो जब उहाँसँग तपाईंसँग हुनको लागि समय छैन। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, तपाईंले दाबी गर्नुभयो भने, तपाईं योजना बनाउन चाहनुहुन्छ र त्यो आउँदैन भने, यो निरुत्साहीको पर्याय हो। पक्कै तपाईको पक्षमा नआउन कुनै बहाना बनाउनुहोस्, किनकि तपाईलाई सधैं हेर्न चाहने व्यक्तिले तपाईको छेउमा हुन सक्दो प्रयास गर्नेछ।
तपाईं अब उनीहरूको प्राथमिकता हुनुहुन्न
पक्कै पनि पहिले नै तिमि संग बस्न को लागी सहारा गर्दैन सामान्य रूपमा। त्यहाँ पनि समयहरू छन् कि यसले तपाईंलाई नराम्रो महसुस गराउँछ जब तपाईं सँगै थप समयको लागि सोध्नुहुन्छ। तिमीलाई पनि भिख मागेको जस्तो लाग्छ।
प्रत्येक भ्रमण बीच थप र अधिक ठाउँ छउनी केही दिनको लागि गायब पनि हुन्छन् र सधैं व्यस्त हुन्छन्। जब तपाइँ यसलाई उसको अनुहारमा फाल्नुहुन्छ त्यहाँ टकराव हुन सक्छ वा उसले के भइरहेको छ वास्ता गर्दैन।
भावी योजनाहरु अलपत्र परेका छन्
ती भावी योजनाहरू साझा गरियो बिर्सिएका छन्। यदि त्यहाँ अब सँगै बस्ने कुरा छैन, यदि भविष्यका बच्चाहरूको बारेमा कुरा छैन र केही गतिविधिहरू साझा गर्ने कुरा पनि छैन भने, यो किनभने सम्बन्ध चिसो हुँदैछ। साथै, यदि तपाइँ यसको बारेमा कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ उसलाई रिस उठ्न सक्छ र यसले तपाईलाई निराश तुल्याउनेछ।
त्यहाँ धेरै अर्थहरू छन् जसले सम्बन्धलाई मेटाउन सक्छ। हामीले पहिले नै वर्णन गरिसकेका छौं, चासो घटनाहरूको यस श्रृंखलामा प्रचलित कुरा हो। नमूनाले यो सबै गर्छ र पक्कै पनि यो सबै पक्षहरूमा लुकाउन सकिँदैन। सबै भन्दा माथि, तपाईंले गर्नुपर्छ आफैलाई नजिकबाट हेर्नुहोस्, यदि यसले तपाईलाई साँच्चै नराम्रो र अविशिष्ट महसुस गराउँछ भने, यो किनभने त्यो व्यक्तिले तपाईलाई मायाको साथ मूल्यवान गर्दैन।
चासो र सकारात्मक पक्षहरू बीच, यो तपाइँको दिन कसरी बित्यो भनेर सोध्नु, कुनै निर्णयको लागि तपाइँमा भरोसा राख्नु, तपाइँलाई जुनसुकै समयमा भेट्ने इच्छा देखाउन र तपाइँको विचारलाई नकारात्मक वा सकारात्मक जवाफमा प्रवर्द्धन गर्न, तर सधैं माया र समर्थन बढाउन। यदि यी मुख्य स्रोतहरू असफल भएमा, तब यो किनभने उसले वास्तवमा तपाईंलाई माया गर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » जब मानिसले तपाईलाई माया गर्दैन, उसले कस्तो व्यवहार गर्छ?